Niala tamin’ny fomba ofisialy tsy ho ao anatin’ny Fifanarahan’i Istambul i Tiorkia. Mihetsika ny vehivavy manerana ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Firotsahana an-tsehatra henjana sy maherisetra nataon'ny pôlisy nanerana ny firenena
Voadika ny 06 Jolay 2021 5:15 GMT
Pikantsary nalaina avy amin'ny tatitry ny Feon'ny Amerika (VOA) ao Tiorkia,
An'arivony maro ireo vehivavy nanao diabe namakivaky ireo tanàna lehibe indrindra ao Tiorkia ny 1 Jolay teo, hanohitra ny fisintahan'i Tiorkia tsy ho ao anatin'ny Fifanarahan'i Istambul. Nisy ny tatitra milaza ny firotsahana an-tsehatra henjana sy nahery setra nataon'ny pôlisy nanerana ny firenena.
Ny 20 Martsa 2021, nambaran'i Tiorkia ny fanapankeviny hisintaka tsy ho ao anatin'ny Fifanarahan'i Istambul. Ny Fifanarahan'i Istanbul dia fifanarahana noforonin'ny Filankevitra Eorôpeàna, ary mamehy araka ny lalàna ny resaka zon'olombelona, natao hisorohana, hanenjehana, hanafoanana ny herisetra an-tokantrano, ary hampiroboroboana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. Tamin'ny 2011 izy io no nosokafana hatao sonia ka firenena 45 no nanasonia azy.
Tamin'ny 2020 i Erdogan no naneho voalohany ny faniriany hisintaka amin'ilay fifanarahana. Ny fanapahankevitra farany kosa dia noraisina taorian'ny namborahan'ny filoha ny drafitra iray momba ny zon'olombelona nolazainy fa “hanatsara ny zo sy ny fahalalahana ao Tiorkia ary hanampy ny firenena hifanaraka amin'ny fenitra napetraky ny Fiombonambe Eorôpeàna.”
Nosakanan'ny pôlisy Tiorka ireo vehivavy nanao hetsipanoherana ny fanapahankevitr'i Tiorkia hisintaka amin'ny Fifanarahan'i Istambul, tao Istanbul, Tiorkia, ny 1 Jolay 2021. Sary an'i Sedat Suna/EPA-EFE@epaphotos pic.twitter.com/pGxzg7c4Bx
— Sedat Suna (@sedatsuna) 1 Jolay 2021
Tao amin'ny tanàna tiorka ao Izmir, tratry ny sakan'ny pôlisy ireo vehivavy, niteraka ny hogahoga hoe “Atsangano ho an'ireo mpamono olona ny sakana, fa tsy ho an'ny vehivavy.” Nampiasain'ny pôlisy ny entona mandatsa-dranomaso no sady nodarohany ny sasantsasany tamin'io mpanao hetsipanoherana, hoy ny tatitra ny Gazete Duvar.
The police attacking the women who are there to defend their right not to be killed, protesting against Turkey’s withdrawal from Istanbul Convention. #İstanbulSözleşmesiHepimizin @MargaretAtwood https://t.co/UScvrQXw79
— Ece Temelkuran (@ETemelkuran) 1 Jolay 2021
Tsy ny angano Handmaid ity fa i Istanbul androany. Pôlisy manafika ireo vehivavy tonga teo hiaro ny zony tsy hovonoina, hanohitra ny fisintahan'i Tiorkia amin'ny Fifanarahan'i Istambul
Nanandratra takelaka ireo mpanao hetsipanoherana tao afovoan'i Istambul, nivaky toy izao: “Tsy hiala vehana amin'ny Fifanarahan'i Istambul izahay. Tsy mbola tapitra ny adinay.”
Mandritra izany fotoana izany, tao Istanbul, tamin'ity indray mandeha ity dia nampiasaina ny entona mandatsa-dranomaso hamelezana ireo vehivavy nanao diabe ho fanohanana ny #IstanbulConvention izay nisintahan'i Tiorkia tamin'ny fomba ofisialy androany. https://t.co/UzcBSkS6NP
— Arzu Geybulla (@arzugeybulla) 1 Jolay, 2021
Talohan'ilay fisintahana tamin'ny fomba ofisialy, ampolony maro ireo vehivavy avy amin'ny lafivalon'i Tiorkia no nizara lahatsarin'ny firaisankinan-dry zareo teo ambanin'ny teny faneva #istanbulsözleşmesihepimizin (Anay ny Fifanarahan'i Istambul).
Nandritra ny hetsika iray nokarakaraina tamin'ny 1 Jolay, teo amin'ny lapan'ny filoha tao Ankara, ho an'ny “Drafitr'Asa Hiadiana amin'ny Herisetra Atao Amin'ny Vehivavy,” nanitrikitrika ny filoha Erodgan fa vonona ny firenena sy ireo mpitondra azy ny hamarana ny herisetra atao amin'ny vehivavy na eo aza ny fanapahankevitra hisintaka amin'ilay fifanarahana. “Satria tsy niaraka tamin'io fifanarahana io no nanombohan'ny ady atao amin'ny herisetra manjo ny vehivavy, tsy hitsahatra ny firotsahantsika an-tsehatra satria hoe niala tao isika,” hoy izy. Nanosoka fepetra vaovao marobe ny filoha ho solon'ilay fifanarahana, isan'izany ny famerenana mijery ireo dingana araka ny lalàna, ny fanatsaràna ny tolotra fiarovana ary ny fanangonana ireo angondrakitra momba ny herisetra an-tokantrano.
Hafa ny fomba fijery eny anivon'ireo hetsika ataon'ny fiarahamonina sivily miady ho an'ny zon'ny vehivavy ao Tiorkia. Ho an'ny hetsika We Will Stop Femicide (WWSF) “Vehivavy tiorka 300 no maty novonoina tamin'ny taona lasa, ny betsaka tamin'ireo dia ny vadiny ihany no mpamono. 171 no hita maty tanaty toedraharaha mampiahiahy,” hoy i Gülsüm Kav mpanorina ny WWSF tamin'ny The Guardian. Tamin'ity taona ity fotsiny, 130 ireo famonoana vehivavy voarakitr'ilay sehatra hatramin'ny Janoary, ary 99 ny tranga momba ireo vehivavy maty tanaty toedraharaha mampiahiahy, araka ny tatitra isambolana fanaon'ilay hetsika.
Mandritra izany fotoana izany, tsy teny an'arabe fotsiny ihany no niseho ny hetsipanoherana tamin'ny 1 Jolay.
Toherin'ireo vehivavy feno fahasahiana ao Tiorkia ny fanapahankevitra tsy mendrika noraisin'ny governemanta hisintaka amin'ny #IstanbulConvention — fifanarahana iraisampirenena miaro ny vehivavy manoloana ny herisetra sy fanararaotana. TSY ho kivy izahay. Hiaro ny zon'ny vehivavy. #IstanbulConventionSavesLives pic.twitter.com/5KTv2ADeuf
— Elif Shafak (@Elif_Safak) 1 Jolay 2021
Nolazain'ny mpitondratenin'ny Departemanta Amerikana raha namaly ilay fisintahan'i Tiorkia tamin'ny 1 Jolay fa “ho an'ny ezaka iraisampirenena hampitsaharana ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia dingana iray miverina” io fihetsika io.”
Tena mandiso fanantenana tanteraka ny fisintahan'i Tiorkia tsy ho ao anatin'ny Fifanarahan'i Istambul, ary dingana iray miverina ho an'ny ezaka iraisampirenena hampitsaharana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Manainga ireo firenena rehetra izahay mba hanamafy ny fiarovan-dry zareo sy ny fandraisany an-tànana ny endrika rehetran'ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na vavy.
— Ned Price (@StateDeptSpox) 1 Jolay 2021
Ny sekretera jeneralin'ny Amnesty International, Agnes Callamard, nilaza fa ilay fisintahana dia mampita “hafatra iray tsy voatandrina sy mampididoza”:
Ny fisintahan'i #Tiorkia tsy ho ao anatin'ny #IstanbulConvention dia mamerina ny famantaranora ho any amin'ny folo taona lasa, raha resaka zon'ny vehivavy. Ity no tendron'ny ranomandry: fanentanana iray karakarakaina maneranan izao tontolo izao manohitra ny zon'ny #vehivavy, SRR, ny fitoviana, #miralenta, ary ny #ZoNyLGBTIQ. Tsy maintsy miaraka isika hanohitra izay mety ho fanafihana maro hafa mbola hoavy. https://t.co/llLVOpMGe9
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) 1 Jolay 2021
Nisy fampakarana fitsaràna natao hampitsaharana ilay fisintahana, saingy nolavina tamin'ny herinandro lasa.